जिदान किन पुनः रियल मड्रिड फर्किए ? यस्तो छ ५ कारण
एजेन्सी । स्पेनिस क्लब रियल मड्रिडले प्रशिक्षकमा जिनेदिन जिदानलाई पुनः नियुक्ति गरेको छ । सोमबार राति प्रशिक्षक सान्टियागो सोलारीलाई बर्खास्त गरि रियलले जिदानलाई क्लब छोडेको २८४ दिनपछि नियुक्तिको घोषणा गरेको हो । जारी सिजनमा रियल सबै उपाधिबाट टाढा भइसकेको छ । घरेलु मैदानमै बार्सिलोनासँग लगातार दुई खेलमा पराजित तथा आयाक्सले पनि ४–१ गोलले पराजित गरेपछि रियलले सोलारी बर्खास्तीमा परेको हो ।
जारी सिजनमामात्रै रियलले तीन प्रशिक्षक नियुक्त गरेको छ । यसअघि जुलेन लोपेटेगी बर्खास्तीमा परेको थियो । सन् २०१८ को अक्टोबर २८ मा भएको एल क्लासिकोमा बार्सिलोनासँग ५–१ गोलको हार व्यहोरेपछि लोपेटेगी बर्खास्तीमा परेका थिए । त्यसपछि अन्तिरिम प्रशिक्षकमा सोलारी आएका थिए । अन्तिरिम प्रशिक्षकको रुपमा आएका सोलारीले टिमलाई सन्तुलित बनाएपछि उनलाई प्रमुख प्रशिक्षककै भूमिका दिइएको थियो तर, पछिल्लो समयको खस्किदो प्रदर्शनको कारण उनी बर्खास्तीमा परका हुन् ।
रियल मड्रिड च्याम्पियन्स लिगबाट आउट भएपछि रियलको ड्रेसिङ रुममा अध्यक्ष फ्लोरेन्टिनो परेज कप्तान सर्जियो रोमोसबीच भनाभन नै भएको थियो । रामोसले अधिकार सबै आफ्नो हातमा लिएर वर्षीक योजना नै नबनाएको आरोप लगाएका थिए । पछि परेजले नयाँ प्रशिक्षकको खोजी गर्न थाले पनि जिदानलाई नै प्रमुख रोजाई बनाएका थिए । लाइनअपमा एन्टोनियो कोन्टे, जोसे मउरिन्हो, मौरित्सियो पोचेटिन्हो भए पनि परेजले जिदानलाई धेरै विश्वास गरेका थिए । साथै, जिदानले पनि परेजसँग धेरै अधिकार मागेका छन् । साथै उनले खेलाडी किन्नको लागि ३०० मिलियन समेत पाउने भएको समाचार प्रकाशित भएको छ ।
१. रियल मड्रिडको खेलाडी किनबेचमा अध्यक्ष फ्लोरेन्टिनो परेजको ठूलो हात हुन्छ । तर, यस पटक जिदान पेरेजभन्दा अघि रहने सहमति भएको समाचारमा प्रकाशित भएको छ । किनकी खेलाडी स्वयंले पनि यसबारेमा परेजविरुद्ध आवाज उठाएका थिए ।
२. जिदानले क्लबसँग आफूलाई अनावश्यक खेलाडी बेच्न सक्नेछन् । यसमा पनि परेजले हस्तक्षेप गर्न पाउने छैनन् ।
३. जिदान प्रशिक्षक रहँदा मार्सेलो र इस्कोलाई मुख्य खेलाडीको व्यवहार गर्थे तर, सोलारीले यी दुवै जनालाई बेन्चमा राख्न थालेपछि क्लब छोड्ने मनस्थितिमा पुगेका थिए । तर, सम्भवतः जिदानले यी दुवै खेलाडीलाई प्राथमिकता दिनेछन् । क्लब छोड्ने भने आउँन दिनेछैनन् ।
४. जिदानले सम्भवत नेयमारलाई किन्ने छैनन् । किनकी उनले खेलाडी स्थानान्तरणको लागि नेयमार किन्ने बजेट पाएका छैनन् । नेयमारको बिकल्पमा किलियन एम्बाप्पे उनको रोजाइमा पर्न सक्छ । आइकार्डी किन्ने सम्भावना पनि प्रवल छ ।
५. जिदानले खेलाडी किन्न पाउने ३०० मिलियनमा उनको ठूलो हात रहनेछ । जिदानको टिमलाई चाहिने खेलाडीबारेको निर्णयमा उनको मात्रै हात रहनेछ ।